I-Redsn0w 0.9.11b1 ivumela ukwehlisa ukuya kwi-5.0.1 ukuya kwi-iPhone 4S | IPhone iindaba
I-Redsn0w ihlaziyiwe yohlobo 0.9.11b Kwaye ngoku masenze ukuhlawula ukuya kwi-iPhone 4S, i-iPad 2 kunye ne-XNUMX yesizukulwane esitsha se-iPad.
I-iPhone 4 nangaphambili inokwenziwa ngenxa yeLimera1n, ukuxhaphaza ifayile, Kodwa asinalo olo hlobo lokuxhaphaza kwi-iPhone 4S okanye kamva, kodwa ngoku ngeSHSH yakho Ngoku unokukhuphela kwi-iOS 5.1 kunye no-5.1.1 ukuya kwi-iOS 5.0.1, ingxaki kukuba ukwenza le nkqubo kuqala uhlaziye kuhlobo lwamva nje emva koko ukhuphele ku-5.0.1, ukuze i-baseband ilayishwe, ukuba ufuna ukukhutshwa ngekhe uyisebenzise, ​​ukuba uxhomekeke kukhululo kunye ne-SAM awuyi kuba nangxaki, kuya kufuneka ugcine ifolda yokutshixa.
Le ndlela intsha yokuthotywa ingavalwa ngokulula yiApple ngohlaziyo lwesoftware.
Ungalanda I-Redsn0w 0.9.11b1 Apha:
Iinkcukacha ezithe xaxe -Unokwenza i-jailbreak ifakwe kwi-iOS 5.1.1 nge I-Redsn0w 0.9.10b8b
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 5 » I-Redsn0w 0.9.11b1 ivumela ukwehla ukuya kwi-5.0.1 ukuya kwi-iPhone 4S
Sicinga ukuba ipad entsha ayinakuthotyelwa kwi-5.01 kuba ayikaze ibe nesoftware….
Phendula ku @pingudlux
molo ndingathanda ukwazi ukuba ngale ndlela ndingathobela kwi-ios 4.3.3 kuba ndine-shsh yolo ion kwi-ipad 2 enkosi
Umbuzo we-GNzl, ndine-4S, kunye ne-ios 5.1 kwaye ngaphambili bendine-ios 5.0.1 nge-jailbreak engafakwanga, ngaba ndingayifumana kwakhona i-shsh kwaye ndiyehlise? Okanye ngenye indlela ndibasindisile ngokucacileyo nge-tinyumbrella, andikwazi?
Kubonakala kum ukuba mhlawumbi ngaphandle kokuba ungayigcinanga i-SHSH yakho kwi-pc yakho, uCydia wayenokubasindisa, ndicinga ukuba ukuba kunjalo unokubuyisa i-SHSH, kodwa andiqinisekanga nge-100%. (Ndilungise xa ndiphosakele)
I-PS: Umzekelo, ndine-iPod Touch 4 kwaye nangona ndiyigcinile i-SHSH ye-IOS endiyifakileyo kwi-PC yam, uCydia undazisa ukuba ine-SHSH 4.4.5, 5.0.1 kunye ne-5.1 ye-iPod yam.
Into yokuqala yokwenza kukuhlaziya kuhlobo 1, khuphela utyikityo 5.1.1 kunye no-5.1.1. Kwi-Redsn5.0.1W uya kokongeza-nangaphezulu-ukubuyisela ukhethe i-0 kwaye emva koko u-5.0.1 emva koko iya kubeka i-iPhone kwimowudi yokubuyisela ukuba ayisebenzi kufuneka uyibeke kwimowudi ye-DFU ngesandla ukhethe uhlobo lwenkqubo onayo i-SHSH yendawo kwikhompyuter okanye ekude kwi-cydia ukuba ufake i-cydia ngo-5.1.1 ungasebenzisa kude kwaye ikubuyisele ku-5.01
Ndiyawenza la manyathelo kwaye ndiyazibuyisela kulowo wayenayo 5.1.1
Shiniori Ndizamile le undixelele yona, kwaye kwi-redsnow ikuvumela ukuba ukhethe ipsw enye, kwaye enye evela ku-5.0.1 ayenzi. Ikucela ukuba ukhethe u-5.1.1 kwaye nje ukuba kwenziwe oku, uyibuyisela ku-5.1.1.
Ndizama ukubuyisela ingxaki yam yokuqala kukuba indixelela ukuba andinakuyenza.
Ndizama ukubuyisela ku-5.0.1 (9A406) khumbula ukuba kukho ama-405 kunye nama-406….
Omnye umntu uyenzeka ??
Kuya kufuneka uyenze nge-9A405
pffff bekufanele ukuba uyichazile eposini ngoku ukubuyisela kwaye ubalinde bahlaziye i-redsnow ye-9A406, kuba benditshilo kuphela shsh
Baxelele ukuba uzama ngayo i-406 yonke ibuyisele kuba ishiya i-iPhone ibuyile kwaye awuyisusi ngokuyicima iphinde iphinde
Ngaba uyayifuna i-sshh ukuze ube nakho ukuthotywa?
ukuba le yindlela endinokudibanisa ngayo? zii-iphone 4s ngo-5.1 no
khange abe ne-cydia.
UMario Cuevas obambe umfanekiso sitsho
Ngaba wakha waqhekeka ejele? Ukuba akunjalo, awukwazi.
Phendula uMario Cuevas
Andicingi njalo, andiqinisekanga, ke ukuba andinakuthotyelwa ngaphandle kwe-sshh, ngaba i-sshh ayinakudluliselwa ukusuka kwi-iphone ukuya kwenye?
I-iphone nganye ine-shshs yayo, awunakutshintsha ukusuka kwi-iphone ukuya kwenye.
Amagama enefayile sitsho
Molo, ingxaki endinayo kukuba xa ndikhetha i-IPSW, redsnow indixelela "Ayikwazi ukwahlula i-IPSW", ndizamile ukukhuphela i-.ipsw kwiindawo ezahlukeneyo kwaye iyaqhubeka indixelela into enye, ngaba ukhona umntu owaziyo lempazamo kungenxa ye?
Molo, ungandinceda? Ndiyenza yonke le nkqubo kakuhle, kodwa ifowuni ihlala ikunye nescreen esimnyama, ipayinapile ayiveli okanye nantoni na, inokuba yintoni?
rPet, amatyala e-iPhone enziwe ngezinto ezenziwe ngokutsha
Ukukhethwa kwezona zicelo zibalaseleyo zokuthatha amanqaku nge-iPad